‘सरी बिन्दु, मलाई माफ गर’ :: Setopati
प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ कथा
बीस वर्षअघिको बिन्दुको डायरीबाट
आकाशसँग मेरो दुई वर्ष प्रेम चल्यो। त्यो अन्तरालमा हामी श्रीमान श्रीमती जस्तै भइसकेका थियौं। मात्र वैधानिकता दिनमात्र बाँकी थियो। केही समयपछि म गर्भवती भएँ। आफ्नो अवस्थाको बारेमा आकाशलाई भन्दा आकाशले भन्यो, ‘यो पेटको शिशु मेरो बच्चा हो। म स्वीकार गर्छु यस्लाई।’
आकाशले यसो भन्दा मैले ठूलो सान्त्वना पाएको थिएँ। सुरूमा, मलाई आकाशले आफ्नो पेटको शिशुलाई स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने कुरामा ठूलो आशंका थियो।
आकाशले मलाई सम्झाउने खातिर यसो पनि भन्यो,‘यो पेटको शिशु जन्मियो भने यस्को नाम किरण राख्छु किनभने मलाई किरण नाम निकै मन पर्छ।’
आफ्नो प्रेमीबाट यस्तो कुरा सुन्दा मैले आफ्नो पेटमा स्नेहालु हात सल्बलाएँ। आफ्नो सृजनामा मलाई गर्व भयो र दुनियाँले पाप भने पनि आकाशको एक चिम्टी सिन्दुरले त्यो पाप छोपिने कुरामा म विश्वस्त थिएँ।
समय बित्दै गयो। यता शिशु पेटभित्र दिनदिनै हुर्कंदै थियो। उता दुनियाँले शिशुको पिताको चिनारी खोज्दै थियो। त्यो शिशुको बारेमा थाहा पाएपछि आकाशको परिवारले आफ्नो सन्तानको रूपमा स्वीकार्न चाहेन। जातीय असमानताको कारण त्यो पेटको शिशुलाई आकाशको परिवारबाट स्वीकार नगर्ने अडान आएपछि आकाश पनि निरिह बन्यो र भन्यो, ‘सरी बिन्दु, मलाई माफ गर। म आफ्नो परिवारको खिलाफ जान सक्दिनँ। त्यो पेटको शिशु तिम्रो मात्र हो, मेरो होइन।’
जीवनको अन्तिम सहारा आकाशबाट पनि यस्तो निर्णय सुन्दा म स्तब्ध बनेँ। सहनै नसकेपछि मैले आक्रोश ओकलें–उसो भए यो बच्चा कस्को हो ? के म … हुँ। जो प्रत्येक रात पुरुषको शरीर फेर्दै हिँड्छे। म त केबल तिम्रोमात्र प्रेमिका।‘
‘के प्रमाण छ तिमीसँग ? यो सहरमा हजारौं लोग्ने मान्छेहरू छन्। सबैलाई यस्को पिता हो भन्यो भने यस्का पिता हुन्छन्?’ आकाशले मलाई धम्कीको भाषामा बोल्यो।
मेरो मुखबाट एउटा बाक्य फुत्त निस्क्यो – ‘त्यो रात के ?’
‘मैले तिमीसँग दुई वर्ष प्रेम गरें। त्यो अवधिमा सात सय उन्नतीस रात त अन्तै बिताएकी छौं।’
आकाशको बोली सुन्नै नसकेपछि म भुइँमा थचक्क बसेँ। दुःख लाग्यो, सात सय उन्नतीस रातले आकाशले एक महत्वपूर्ण रातलाई महत्वहीन पार्न खोज्दै छन्। आकाशको लागि मैले सबै सपनाहरू त्यागेकी थिएँ। आकाशले यसो भन्दा मैले रिसको झोँकमा भनें,‘यदि यो बच्चा तपाईंलाई तपाईंको जस्तो लाग्दैन र कुनै शंका छ भने यो कोपिलामा लात हानिदेऊ। यदि माली नै छैन भने त्यो फूलले फक्रेर के पाउँछ ?’
आकाशले म जस्तो एक कमजोर नारीको चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार्यो र मेरो पेटमा लात हान्यो।
आकाशको आघात पाएर म अचेत बनें।
होस खुल्दा हस्पिटलमा मेरो पेट हलुंगो बनिसकेको थियो। त्यहाँ फूलको सपना देख्ने कोपिला, कोपिलामै ओइलाइसकेको थियो।
समय बित्दै गयो।
मेरो जीवनमा एउटा परपुरुष घाउ बनेर दुखिनै रह्यो। त्यही बदनामीको कारण मेरो सिउँदो रंगिन चाहेर पनि कहिल्यै रंगिएन। म अविवाहित रहे।
आकाशले त्यो घटनाको केही समयपछि घरपरिवारले रोजेकै एक युवतीसँग बिहे गर्यो। बिहे गरे पछि सपरिवार पोखरा सरे। त्यसपछि पोखरा र काठमाडौंको भौगोलिक दूरीले हाम्रो भेट कहिल्यै भएन। मलाई अब आकाशको बारेमा केही जानकारी छैन।
गएको शनिबार म पशुपतिको मन्दिरमा पूजापाठको लागि जाँदै गर्दा आकाशसित मेरो जम्काभेट भयो। आकाश आफ्नी श्रीमती र छोरासँग आएको रहेछ। उस्ले मेरो बाटो छेकेर बेइज्जत गर्ने भाषामा बोल्यो,‘पोते, सोते र सिन्दूर पनि देखिँदैन। अझै बिहे भएको छैन र तिम्रो? कि बूढीकन्या नै बस्छौ अब ? एकक्षण हाँसेपछि पुन: आफ्नो छोरातिर इशारा गर्दै बोल्यो – यो मेरो छोरा। हेर न छोरा त म जत्रो नै अग्लिसक्यो !’
आफ्नो छोराको अग्लाइमा गर्भ गर्दै बोल्यो। एकक्षण त चुप लागें तर ममाथि अन्याय नै भएको हो भनी बोध भएपछि आफूभित्रको कमजोर नारीलाई कतै फ्याँकेर बोलें- ‘यदि किरण, यो धर्तीमा भएको भए, त्यो झन् कति अग्लिसक्थ्यो होला, कल्पना गर्नुस्!’ एउटी नारीको सानो स्वरको प्रश्न मेरो कर्णपर्दामा विस्तारै ठोक्किन आयो, ‘को हो किरण ?’ मैले पुरुषको प्रत्युत्तर सुन्न चाहिनँ।
म पूजा गर्न आएको, मन्दिरतिर विस्तारै पाइला बढाएँ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २१, २०७६
विमानस्थलको डस्टबिनमा फ्याँकियो हाम्रो मादल